Ragnarok Labyrinth NFT Apk Dhawunirodha Ye Android [Kuwana Mutambo] - Luso Gamer
Ragnarok Labyrinth NFT Apk Dhawunirodha Ye Android [Kuwana Mutambo]
April 14, 2022 by John Smith
Kutengeserana kweCrypto kunoonekwa sekunyanya kubata purofiti pamhepo pamhepo. Pamusoro pezvo, ikozvino maNFTs ari kufamba mumusika ayo akabatana nemitambo yemitambo. Tichitarisa basa remutambi uye maitiro ekuwana mari pano tinopa Ragnarok Labyrinth NFT.
Chaizvoizvo, iyi iRPG Gaming application yakagadziridzwa Android gamers. Muno mukati memutambo wemutambo, vatambi vanoda kurwa uye kukunda mhuka dzemuvengi mukati memutambo. Uyu ndiwo mukana wakanakisa wekuti vateveri vawane mari yakanaka kuratidza hunyanzvi hwekutamba.
Kunyangwe vadi vemutambo vanogara vachiodzwa mwoyo mushure mekuodzwa mwoyo nevakuru vavo. Nokuti vanhu havakwanisi kufanotaura ramangwana ravo. Nekudaro, ikozvino mamiriro achinja zvachose uye vatambi vanogona kuvaka basa rakanaka vachitamba izvi Tamba & Gamuchira Mitambo.
Chii chinonzi Ragnarok Labyrinth NFT Apk
Ragnarok Labyrinth NFT Android ibasa repamhepo rinotamba chiitiko chemitambo application. Iko vatambi vakanyoreswa vanobvumirwa kutamba uye kunakidzwa nenguva yemahara kuwana purofiti yakanaka. Maitiro ekuwana mari ari nyore uye haadi hunyanzvi hunyanzvi.
Nekudaro, tichitarisa rubatsiro rwemutambi pano tichaedza nepatinogona napo kuongorora maitiro acho nhanho. Kutevera matanho kunobatsira kudzidza uye kuwana purofiti yakanaka munguva shoma. Rangarira kuti mutambo uyu unotambwa chete uye unotungamirwa online.
Izvi zvinoreva kuti yakatsetseka yekubatanidza internet inogona kudiwa pakutamba mutambo. Saka isu tinokurudzira mafeni kuti atange nekukurumidza uye akatsetseka yekubatanidza vasati vatanga kutamba. Pane zvimwe zvinhu zvakakosha zviripo zvekusarudza kubva mukati.
Kusarudza izvo zvinhu kuchabatsira kukunda zvikara. Kunze kwekukunda zvikara, kuvandudza masimba ehunhu kuchaita shuwa kuhwina kusingakundike mukati menhandare yehondo. Usambofa wakakanganwa kuverenga nhamba uye kurwisa kukuvadza.
zita Ragnarok Labyrinth NFT
zera 98.25 MB
Developer Giravhiti Game Batanidza
Package Zita com.ggl.labyrinth.aos
chikamu Games - Kudamba
Vazhinji vevatambi vanogara vachiita chikanganiso chekutora chikamu mukati mekurwa pasina kuverenga mhedzisiro. Sezvatakambotaura kuti NFTs inobatanidzwa zvakananga uye pasina kuisa mari hazvibviri kuwedzera mihoro.
Pane zvimwe zvakakosha zvinogona kusangana nevatambi. Izvi zvinosanganisira kurasikirwa neNFTs pasina chikonzero kana ruzivo. Kunyangwe nyanzvi dzichiti matambudziko akadai anogona kuitika nekuda kwehuwandu hwekuverenga kana kukanganisa kwemukati. Nyaya dzakadai dzinozogadziriswa zvoga.
Kuita kuti mutambo wemutambo uwedzere kunakidza uye unokwezva. Izvi zvine simba zvakavanzika zvinhu zvinoiswa mukati meDungeon Maze. Kuti utore izvo zvinhu, vatambi vanoda kushanyira uye kugadzirisa iwo mazes mutambo usati wasvika kumagumo.
Iwo akawanda makiyi maficha anosvikika kushandisa mukati memutambo wemutambo anosanganisira Auto Play, Sharevice, Labyrinth, Gaming Modes, Rutsigiro rweNharaunda, Regular Updates uye Auction House. Mukuwedzera, dzimba dzekutengesa dzinoita basa rinokosha.
Iko vatori vechikamu vanogona kuisa zvinhu zvakawanikwa mukati meokisheni imba inotengeswa. Kana iyo auction yapera, mari inozoiswa muaccount account otomatiki. Kana iwe wagadzirira kuvaka basa rakanaka rekuwana NFT's wobva waisa Ragnarok Labyrinth NFT Dhawunirodha.
Yemahara kuwana kubva pano.
Hapana kunyoreswa kwepamberi kunodiwa.
Nyore kuisa uye kutamba.
Kubatanidza mutambo mukati me smartphone kunopa A-Maze-Experience.
Iko vatambi vanozoongorora maze magomba.
Kugadzirisa iwo mapuzzle kunobatsira kuwana zvinhu zvakasiyana.
Iwo maNFT anoshandurwa kuita mari chaiyo.
Hapana wechitatu ads anowedzerwa.
Zvikara zviripo kukukunda.
Multiple emitambo modes anowedzerwa.
Iyo gameplay interface yakachengetwa ine simba.
Maitiro ekurodha Ragnarok Labyrinth NFT Game
Iyi chaiyo yekutamba application inowanikwa kuti uwane kubva kuPlay Store. Nekudaro, inochengetwa pakati pezvigadzirwa zvinorambidzwa uye chete zvigadziriso zvinotenderwa zvinotenderwa kurodha uye kuwana mafaera. Saka chii chinofanira kuitwa nevashandisi veandroid mumamiriro ezvinhu akadaro?
Kana iwe wakavhiringika uye uchitsvaga yakanakisa imwe nzira yekuwana yekutanga Apk mafaera. Ipapo isu tinokurudzira avo vanoshanyira webhusaiti yedu kurodha yakananga Apk faira mahara. Ingobaya pamusoro peiyo link yakapihwa uye kurodha kwako kunotanga otomatiki.
Kuvapo kwechishandiso pamusoro pechitoro chekutamba kunoratidza iyi vhoti huru yekuvimba muchigadzirwa. Kunyangwe isu takatoisa mutambo pamusoro pemidziyo yakasiyana. Mushure mekuisa mutambo hatina kuwana dambudziko rakananga mukati.
Kune akawanda emamwe Play & Ear emitambo maapplication akaburitswa pano pawebhusaiti yedu. Kuisa uye kuongorora iwo mamwe mimwe mikana ndapota isa inotevera Apk mafaera. Izvo zvinosanganisira mRewards Apk uye Kabibe Game Apk.
Avo vakagona kutamba mitambo asi vanozviwana vari mukati memusungo mukuru. Nekuti zvino havana kuwana basa mukati memitambo yakadai. Ipapo usazvinetse nekuti pano takabudirira kuunza Ragnarok Labyrinth NFT gameplay kune Android gamers.
Categories Kudamba, Games Tags Tamba & Gamuchira, Ragnarok Labyrinth NFT, Ragnarok Labyrinth NFT Apk, Ragnarok Labyrinth NFT Download, Ragnarok Labyrinth NFT Game Post navigation
HomeSafe Apk Dhawunirodha Ye Android [Chengetedzo Tool]